Poland inozivisa mamiriro ekukurumidzira pamuganhu weBelarus nekuda kwevasiri pamutemo vanoenda kune dzimwe nyika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Poland Breaking Nhau » Poland inozivisa mamiriro ekukurumidzira pamuganhu weBelarus nekuda kwevasiri pamutemo vanoenda kune dzimwe nyika
Belarus Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Poland Breaking Nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mutongi anodzvinyirira weBelarus, Alexander Lukashenko akazivisa kuti hutongi hwake hahuchaedza kumisa vanoenda kune dzimwe nyika kuti vayambukire muEU mushure mekunge nhengo dzayo dzatemera Belarus chisungo pamusoro pesarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuna 2020, dzakabirirwa naLukashenko.
Nhamba dzevanoenda zvisiri pamutemo kuPoland inokwira zvakanyanya.
Nyika yekukurumidzira yakaziviswa pamuganhu wePoland-Belarus.
Belarus inobatsira uye kudzikisira kutamira zvisiri pamutemo kuPoland nedzimwe nyika dzeEU.
Mutungamiri wePoland akazivisa mamiriro ekukurumidzira mumatunhu maviri ari pamuganhu neBelarus nekuda kwekukwirisa kwakanyanya muhuwandu hwevanopinda zvisiri pamutemo pamiganhu yekuyambuka.
Ino inguva yekutanga munhoroondo yenyika yapashure pechiKomonisiti mamiriro ekukurumidzira akaitwa pamuganhu wawo - Porendi haasati ambounza matanho akadaro, uye akadzivirira kumisikidza imwe kunyange panguva dzakaomesesa denda re COVID-19, kunyangwe paine kushevedzera kuhurumende kuti iite saizvozvo.
Mamiriro ekukurumidzira aigona kuramba achishanda kwemazuva makumi matatu.
"Mutungamiri wenyika afunga kuunza mamiriro ekukurumidzira munzvimbo dzakatarwa nedare reMakurukota," mutauriri waDuda, Blazej Spychalski, akaudza musangano nevatori venhau neChina.
"Mamiriro ezvinhu pamuganhu neBelarus akaoma uye ane njodzi," akadaro Spychalski. "Nhasi, isu sePoland, tichiona miganhu yedu pachedu, asiwo miganhu yeEuropean Union, tinofanirwa kutora matanho ekuona kuchengetedzeka kwePoland neEuropean Union."
NeChipiri, hurmende yakabvunza Duda kuti aise mamiriro ekukurumidzira mune dzimwe nzvimbo dzePoland kumabvazuva kwePodlaskie neLubelskie matunhu ari pamuganhu neBelarus. Iwo murairo waizoshanda kumatunhu ese gumi nemakumi masere nematatu akanangana nemuganhu uye aizoita nzvimbo yakadzika makiromita matatu pamuganhu neBelarus.
Chiyero ichi hachisati chazotenderwa nedare repasi reparamende yePoland - iyo Sejm. Iyo yakarongerwa kusangana nezvenyaya iyi Chishanu kana Muvhuro, sekureva kwenhau dzePoland.
Kufamba uku kunouya mukati mekuwedzera kwekutama zvisiri pamutemo izvo Poland nedzimwe nyika dzeBaltic vanga vachitarisana nazvo mumwedzi yapfuura. Zviuru zvevatorwa vasingatenderwe vanofungidzirwa kuti vari kufamba kubva kuMiddle East vakayambuka kana kuyedza kuyambuka vachipinda muLatvia, Lithuania nePoland kubva kuBelarus yakavakidzana panguva iyoyo.
Vachengeti vemuganhu wePoland vakati neChitatu kuti Nyamavhuvhu chete vakaona huwandu hwe3,500 yekuyedza kwevanopinda kupinda muPoland kubva kuBelarus. Varindiri vakadzvinyirira 2,500 XNUMX kuedza kwakadaro.
Zviitiko izvi zvakatoita kuti Warsaw itumire mauto kunovaka chipenga chakareba mamita 2.5 chakagadzirirwa kutambanudza mizhinji yemuganhu we150-kilomita (93-mamaira) neBelarus.
The EU akambopomera Belarus yekuita "kurwisa kwakananga" pachikwata ichi uye kuyedza "kushandisa vanhu kuita zvematongerwo enyika" nekumanikidza vanoenda kumiganhu yenyika dziri nhengo. Vilnius akapomerawo Minsk zvekubhururuka nevatorwa kubva kunze kwenyika nekuvasunga kumuganhu senzira yehondo.